Wareysi:- Hooyo Soomaaliyeed oo ku dhibaateysan magaalada Kampala | Wareysi:- Hooyo Soomaaliyeed oo ku dhibaateysan magaalada Kampala | Hal Sheegaha La Hubo
Wareysi:- Hooyo Soomaaliyeed oo ku dhibaateysan magaalada Kampala
Saciido Maxamed Hiraabe waa hooyo Soomaaliyeed oo ku dhibaateysan caasimadda dalka Uganda ee Kampala, Waxaana dhawaan kula kulmay xaafadda Kisenyi oo ay Soomaalida ka degan tahay magaalada Kampala.
Si aan wax badan uga ogaado xaaladeed Nololeed ayaa waxaa ii suurtagashay inaan dhibkeeda idiin soo gudbiyo si ummadda Soomaaliyeed ee Eebe wax siiyey u caawiyaan, waxaana uu dhacay wareysigii aan la yeeshay sida tan:-
S:- Hooyo marka hore magacaa?
J:- Magaceyga waa Saciido Maxamuud Hiraabe
S:- Xaaladaada Nololeed ma iiga warami kartaa?
J:- Haa, waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo cuuryaan ah, kuna nool xaalad adag.
S:- Cuuryaanimada maku dhalatay mise si kale ayaa u cuuryaantay?
J:- Maya , kuma dhalan balse waxaan cuuryaamay sanadkii 2009,ka anoo jooga dalka Sacuudiga, waxaana ka soo dhacay jaran-jaro anoo leh uurka mid ka mid ah wiilashaan ila socda, waxaana ka jabay dhabarka kadibana waxaan waayey dareerka qeybta hoose ee jirkeyga.
S:- Waa sidee iminka xaaladaada cafimaad?
J:- Runtii xaaladeeyda caafimaad waa liidataa, waxaan la ahay dhabarka, kaasoo lagu sameey dhowr qalin, hadda ma awoodo inaan saxroodo, dhib badan ayaa ku qabaa, kaadidana ma ceshan karo, har iyo habeen xanuun joogtaa ayaa wehel u ahay.
S:- Xaaladaada Nololeed iyo tan caafimaadba waa liidataa marka yaa ku daryeela oo kula socoda?
J:- Waxaa il socda labo will oo aan dhalay, kuwaasoo kala ah Maxamuud Ibraahim oo jira 13-sano iyo Cabdullaahi Xussen oo isna jira 8-sano.
S:- Carruur kale ma dhashay oo aan kuwaan ahayn, hadaad dhashayna xagee jiraan?
J:- Haa, Soomaaliya waxaa jooga 4-kale oo aan dhalay labo wiil iyo labo gabdhood, waxayna joogaan.
S:- Xagee buu jiraa carruurta Aabahood?
J:- Carruurta aan dhalay waa kala aabo, afarta Soomaaliya jirta waa isku aabo, halka kuwa ila socda iminkana ay yihiin kala Aabo islamarkaana waa agoon.
S:- Ma heshay daryeeel Caafimaad ah tan iyo markii uu ku soo gaaray dhibkaan?
J:- Waxaan ku laabtay Soomaliya, waxaana lay geeyay Isbitaalka Turkiga uu maamulo ee Erdugan . waxay ii cadeeyeen inaan xaaladeyda caafimaad dalka gudihiisa waxba looga qaban karin, dadka aan ka dhashayna ma ahayn kuwo awooda inay I geeyaan dalka dibaddisa, raggii aan carruurta u dhalayna weyba geeriyoodeen, caruurteydana ma aha kuwo gaaray heer ay xaaladayda caafimaad ay wax ka qaban karaaan, intaas kadib waxaan go’aansaday inaan soo aado waddanka Uganda anigoo hamigeeygu yahay inaan helo Daryeeel iyo Nolol.
S:- Ma jiraan ilaa iyo iminka dad ku caawiya maadaama Nolosha Kampala ay tahy mid adag? Mise ka heshay Soomaalida Uganda ku nool wax saacidaad tan kolkii aad timid Kampala?
J:- Markaan Uganda imid waxaan tagay mid ka mid ah Masaajidyada caasimadda dalka Uganda ee Soomaalida u badan yihiin si aan kaalmo uga helo, waxay ii aruuriyeen wax xoogaa lacag ah, taasoo la iigu soo dhiibay Nin aan qaraabo nahay, balse nasiib darro Ninkaas wuxuu lunsaday lacagti, imana soo gaarsiin xitaa 1-dooral, mana jirto meel kale oo aan wax ka helay, marka waxaan ahay hooyo dhibaateysan oo uu xanuun daashaday, xanuunka waaxaa ii sii dheer Kaadida wey iska socoto oo ma ceshan karo, saxaraduna wey igu dhegan tahay oo waxaan iskaga keenaa qaababab kale oo runtii dhib igu ah”.
S:- Iminka sidee ku maaraysaa Noloshiina adiga iyo carruurtaada lugaha kuu ah ileen waxaa tahay ruux naafo ah?
J:- Waxaan har iyo habeen wareegnaa gudaha magaalada Kampala gaarahaan xaafadda Soomaalida ku badan tahay ee Kisenyi iyadoo gaariga gacmeedka igu riixayaan Wiilasheyda si aan Nolosheena u maareyno,waxa yar oo aan helno waxaan ku dabarnaa kirada Guriga iyo Nolosheenna, taasoo mararka qaar aan kala kulmo dhego hadal badan, waana niyad jab joogta ah ileen Soomaalida waxay ku maahmaahdaa “Bugto badan iyo Baahi badan waa leysku nacaa, xaqiiqdii labadii Bilood ee la soo dhaafay ma helin waxaan isaga bixino Kirada Guriga inkastoo dad deriskeenna ah ay iska aruuriyeen si ay nooga bixiyaan Kirada Guriga.
S:- Maxaa ka codsaneysaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda Allaha wax siiyey?
J:-Waxaan ka codsanyaan ummadda Islaamka gaar ahaan dadka Soomaaliyeed kuwooda Eebe wax siiyey inay Alle dardiis i kaalmeyaan maadaama aan ahay hooyo xaaladeeda caafimaad aad uu aad liito oo aan waxbo haysan.
S:- Ma leedahay teleefan lagaala soo xiriiro?
J:- Haa, teleefankeyga waa:- +256792545796.
Ugu dambeyntii walaalka Muslimaka ahoow/walaasha Muslimadda aheey fadlan Allaha dartiisa u caawi Saciido Maxamuud Hiraabe oo ah hooyo Soomaaliyeed, runtiina intii aan wareysanayey Saciido waxaa indhaheeda soo buux dhaafiyey ilin, waxaana wejigeeda ka muuqday murugo iyo tiiraayo.
Haddaba si aan kaalinteyda Mislinimo iyo midda Soomaaliyeed uga qeybqaato, dhibkana aan ula wadaago hoyo Saciido ayaan waxaan go’aansaday idhibaatadeeda u soo bandhigo shacbi weynaha Soomaaliyeed meelkasta oo ay dunida ka joogaan.
W/Wareystay:- Axmedsaadaq Yuusuf Maxamed